Eegno jailbreak uga faaidaysan tufaax oo ay ku dhinteen in macruufka 9 beta
Wixii Apple, waxaa laga yaabaa in taageerayaasha kasta oo halkaas aan la sugi karin ilaa software kama dambaysta ah waxaa la sii daayey ee dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira sababaha qof ayaa weli ma dooratay qaadashada macruufka 9 beta? Its buggy iyo nooca dangly lagu hayo dadka ka fogaadaan qaadato.
Feature ugu weyn, hase yeeshee waxa uu isku dayay in uu soo jiidaysaa oo la yahay JAILBREAK. Dadka ayaa lagu rakibay JAILBREAK in ay macruufka version ka dibna lagu rakibay beta software cusub ma lumin doonaa JAILBREAK loo baahan yahay oo keliya, laakiin sidoo kale kaliya waa laga tegi doonaa aallada unjailbreakable. Waxa dhib noqon lahaa tuugada in ay sii daayaan qalab JAILBREAK u beta qoraalkii la heli karo updates software macruufka Midkoodna Apple awood u yeelan doonaan si uu u xaliyo dayacanka ama Imaanshiyaha gaaban loo isticmaalo qalab JAILBREAK ee sida version. Halkan waxa aad ku arki at jailbreak uga faaidaysan in tufaaxa dilay macruufka 9 beta: -
a) Video Murayaad
Ka hor inta in macruufka, dadka tweak yaabaa software video by multitasking on aad tube, Lugood, Safari iyo ciyaaryahano kale. Miyaad kari wayday inaad videos meel daaqadaha badan oo isticmaalaya tweak JAILBREAK this. Si kastaba ha ahaatee in macruufka 9, Apple ayaa bilaabay tweak this iyada oo loo marayo feature cusub oo loo yaqaan Picture Picture in hab on iPad.
b) Settings Search
Tani waxa ay ahayd weli tweak kale JAILBREAK caan ah. Asal ahaan waxa ay si sare ee kasta app goobaha ku darayaa sanduuqa raadinta ah. Apple oo kaliya guuriyeen isku riday oo feature la mid ah ee macruufka 9. inaad sameyso waxaa kaliya abuurtaan Settings ka app ka screen gaarka ah. Weerar dadban ku hoos shaashadda si ay u helaan bar raadinta dusheeda.
c) Kaadhkaaga Selection
Iyadoo doorashada dadban, mid qoraal karo iPad isticmaalaya waji on keyboard ay u guuraan dulqabo iyo sidoo kale doortaan qoraalka. Apple ayaa sidaas hadda ku daray habkaani in keyboard iPad.
In macruufka 9, mid hadda ka bedeli kartaa kiiska loo baahan yahay warqado ku saabsan mid ka mid ah ayaa keyboard software isku mar marka muftaaxa Shift la sii adkeeyey, taas oo dhab ahaan la mid ah waxa tweak Carwada ma
In mid ka mid ah uga faaidaysan JAILBREAK oo macruufka 7 ayaa modified iyo bedeshay xataa tan waxaa ka mid ahaa. App ayaa ugu baaqay BattSaver taas oo la jaan macruufka 5, 6 iyo 7, BattSaver dhab tweak ka caawisaa in ay labanlaabantay nolosha batariga ee qalabka macruufka jailbroken ah. Waxaa jira qaar ka mid ah qaababka maamul awood cusub iyo sidoo kale mid ka mid caan ah waa Mode ah Low Power whih yimid cusub ee macruufka 9. Waxaa sidaas kaa caawinaysaa in aad sii kordhiyo nolosha batteriga.
Copic, foomka gaaban Contact Picture, waxay ka caawisaa si ay u muujiyaan sawirro xiriir kuwaas oo meel kasta waa in aad iPhone, iPad ama xataa iPod. Waxaa sidaas aad uula mid tahay macruufka 9 beta muujinaya sawiro qof oo ku nool app Fariimaha dhan qalab kale.
Apple ayaa qaar ka mid ah curiyay la yaab leh. Mid ka mid ah waa splitview taas oo kuu ogolaanaysaa inaad multitask laba barnaamijyadooda waqti isku mid ah. Tani waa waxa ReachApp ka doesnow ay ku daray kala-shaashadda. Waxaa sidaas isticmaala feature stock gaari awood u.
Nooc mew Tani ah iyo foomka of tweak JAILBREAK u ogolaanaya mid si buuxda u sheeg barnaamijyadooda kala duwan oo ku tusi kartaa waqtiyada kala duwan oo kala duwan oo ah maalinta ee Xarunta Xakamaynta. Iyada oo macruufka 9 Si kastaba ha ahaatee, Apple ayaa soo bandhigay muuqaal cusub oo Dadka u Sahlaya caawin iyo soo jeedin Chine in ay daah-ku saleysan caadooyin user ee.
i) Quick Reply
Reply app Quick kuu ogolaanaysaa inaad ka jawaabto dadka CHAT iyaga oo aan xataa dhibaato ah ee soo galaya app. Si kastaba ha ahaatee waxa aan la soething in uu yahay layaab cusub. Faaidaysan kale JAILBREAK sida
• IMN u LINE la Facebook Rasuulka
• Nuntius u WhatsApp
• QuickReplier u Viber ayaa sidoo kale isku dayaya in ay la shaqeeyaan oo ay tijaabiyaan.
Sidaas darteed, waa ku ceeb naag inay qalab sida tufaaxa lahaa in ay dilaan user uga faaidaysan JAILBREAK saaxiibtinimo loogu talo galay dadka. Iyada oo ilaa gradations iyo horumar dhacaya, wax yar la inkasta oo uu sheegay karo.
Halkan waxaa codbixin loo qaaday oo jawaabo ka doonayaa dadka iyo soo arkee bal inay JAILBREAK lahaa Ios9?
74% dadka ku jawaabay in positive halka 26% ay weli tahay clueless oo sheegay in ay doonayaan sugitaanka.
Halkan waa fursad waayo, adigu waxaad dadka iyo taageerayaasha taageerayaasha macruufka in la siiyo in jawaabaha aad iyo buuxi jawaabahaaga. Maxay noqon doontaa talooyin aad? Waxaad weli doonaa JAILBREAK macruufka 9 ?
Nooca Y u haa iyo N u lahayn. Fadlan ha reply haddii aad rabto in aad taloooyin ku ool ah iyo haddii aad tahay taageere die- adag tufaaxa.
> Resource > macruufka > eegno jailbreak uga faaidaysan in tufaaxa dilay beta Ios9